Nezvedu - Hangzhou Zongju Optical Equipment Co, Ltd.
Hangzhou Zongju Optical Equipment Co, Ltd. inotungamirwa muHangzhou, China. Isu tiri nyanzvi yekutengesa inoshanda mukutsvagisa nekusimudzira, kugadzira uye kutengesa kweiyo Optical fiber transmission uye telecommunication michina.
Zongju inopa yakasarudzika sarudzo yemagetsi fiber michina. Nzvimbo dzedu huru dzechigadzirwa dzinosanganisira: CATV Optical transmitters, Optical fiber amplifiers (EDFA, YEDFA, nezvimwewo), Optical receivers, PON system OLT uye ONU, dispersion compensation modules, Optical switch, SAT-IF transmission, Optical fiber media converter, akasiyana optical fiber passive zvinoriumba, chirongwa chekuisa bvunzo maturusi uye zviridzwa, nezvimwe. Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mumatunhu enetiweki, katatu kutamba uye FTTx, ichipa yakanakisa uye yakakodzera zvigadzirwa kune epasi rese network.
Kambani yedu yakagara yakanamatira kune teneti yemhando yekutanga, mutengi kutanga, uye sevhisi yemhando. Nezvigadzirwa zvemhando yepamusoro, mukurumbira wakanaka, uye basa rakanakisa, isu takamisa kubatana kwenguva refu nevashandisi, vagoveri, vanoisa uye OEM / ODM munyika zhinji, uye vanowana kugutsikana kwavo uye kuzivikanwa.
Tinotarisira kuve shamwari dzako dzakavimbika uye vatinoshanda navo, kukudziridza pamwe chete uye kumisikidza kwenguva refu kuhwina-kuhwina kubatana.